ROMY & Savannah ပြဿနာ: မာတင် Vrijland
သေမင်း၏ Savannah Dekker အကြောင်းမရှိ NFI ကဆုံးဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ROMY & Savannah ပြဿနာ	by မာတင် Vrijland	နိုဝင်ဘာလ 23 2017 အပေါ်	•7မှတ်ချက်
အဆိုပါကြေးနန်း Savannah Dekker ၏သေမင်း၏အကြောင်းရင်းမှာ NFI ကဆုံးဖြတ်မရနိုငျသောအစောပိုင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Anass Aouragh ကိစ္စတွင်လူသိများဖရန့်က de Groot, (ယခုလွတ်လပ်သောဖြစ်ဖို့ NFI ထှကျသှား) ရောဂါဗေဒပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ "ကျွမ်းကျင်သူ" လတ်ဆတ်တဲ့ရေထဲမှာပြီးသားရက်အနည်းငယ်ဖြစ်သည့်ကုမ္ပဏီထိန်းသိမ်းထားခက်ခဲဖြစ်နေဆဲကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, [ ... ]
Key ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ Romy Nieuwburg နှင့် Savannah Dekker ကိစ္စတွင်!
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ROMY & Savannah ပြဿနာ	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 23 2017 အပေါ်	• 12 မှတ်ချက်
သင်ကလိုတဲ့အခါတစ်ခုခုမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်သင်လိုချင်သောအခါတိုင်းအာရုံလွှဲပြောင်းနိုင်ဖို့မီဒီယာမှအဆိုပါလှည့်ကွက်။ ဥပမာအားဖြင့်, နိုင်ငံအများအပြားက [ ... ] အဲဒါကိုရေတွင်းတစ်တွင်း-paid စျေးကွက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုသတိထားမိမပေးအောင်, မတော်တဆမှုကြောင့်ချိတ်ဆက်နေဖြင့်ဂိမ်း Pokemon Go ကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုငျခဲ့ကွ
Romy နှင့် Savannah အမှု၌အစာရှောင်အရေးယူ: ရဲတပ်ဖွဲ့မြောင်း droogwaar တင်ပြရန် "Savannah ရှာတွေ့ခဲ့သည်"
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ROMY & Savannah ပြဿနာ	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 17 2017 အပေါ်	• 21 မှတ်ချက်
ယခုရက်သတ္တပတ်ခြောက်ပတ်အကြာမြောင်းအတွင်း Savannah Dekker သေပြီတွေ့ရှိခဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်းသော်လည်း, ဆုံးဖြတ်ချက်တရားမျှတမှုရုတ်တရက်ကောက်လိမ်စက်မှုအပေါ်တစ်ဦးမြောင်းကို တင်. အခြောက်။ အဘယျသို့လှည့်ကွက်ယခုတိုင်အောင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့တရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်များထံဦးဆောင်လျက်ရှိသည်ပြီးနောက်ရက်သတ္တခြောက်ပတ်ယခုဆုံးဖြတ်သောသူသည်ဖြစ်သောကြောင့် [ ... ] လုံးဝမသိရသေးဖြစ်ပါသည်
Savannah နှင့် Romy ကိစ္စတွင်ရဲအရာရှိဆန့်ကျင်စွဲချက်
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ROMY & Savannah ပြဿနာ	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 15 2017 အပေါ်	• 8 မှတ်ချက်
မီဒီယာနှင့် တွဲဖက်. ရဲတပ်ဖွဲ့တကယ်ကသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံး Romy နှင့် Savannah သိသာ Romy နှင့် Savannah အမှု၌အဖြေတွေကိုနှင့်အထူးသဖြင့်အမှုအရာဖြေရှင်းနိုင်သကဲ့သို့ကောင်းသောဖြစ်ကြောင်းထင်မြင်ပေးပေမယ့်, ဒီလုံးဝကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်လေးက Romy Nieuwburg မီဒီယာအတွက်လူသိများနှင့် [ ... ] အသတ်ခံခဲ့ကြလိမ့်မယ်
Psyop Romy နှင့် Savannah အမှု၌တရားခံလူသတ်မှု Romy Nieuwburg လည်?
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ROMY & Savannah ပြဿနာ	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 10 2017 အပေါ်	• 17 မှတ်ချက်
"ဒီ 14 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်အဓမ္မပြုကျင့်တော်မူပြီးမှဝန်ခံနှင့် Hoevelaken ၌သူ၏အတန်းဖော် Romy Nieuwburg (14) ဦးသေဆုံး, သူ့လုပ်ရပ်ပြီးနောက်စိုးရိမ်ထိတ်လန်မရှိအချိန်သို့ပွေးလေ၏သိရသည်။ ကံကြမ္မာကိုအပေါ်ကျန်ကြွင်းရစ်သောသဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့တိကျသောပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအဆိုအရသောကြာနေ့2ဇွန်လ။ အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူ [ ... ] အိမ်ပြန်လမ်းမှပေါ်လင်မနစ်တဲ့ဖန်ခွက်သောက်
အဆိုပါ Romy & Savannah ကိစ္စမီဒီယာပုံပြင်များနှင့် unsubstantiated "သက်သေအထောက်အထား" stabbing ဖြစ်နေဆဲ
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ROMY & Savannah ပြဿနာ	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 1 2017 အပေါ်	•0မှတ်ချက်
ဒါဟာအပြိုင်လူသတ်မှု Romy နှင့် Savannah ထူးခြားတဲ့ဇာတ်လမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ လူသတ်မှု Romy သင်တန်းတွင်ကျနော်တို့နီးပါးဘာမျှနားထောင်ကြလော့။ အကြောင်း, ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, "ဖြေရှင်း" ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူဝန်ခံခဲ့သည်။ တစ်ဦးက 14 နှစ်အရွယ် Romy အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်အသတ်ခံရ။ ဒါကြောင့်ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့ကြသည်လျှင်မည်သို့သူသည်ဤအံ့ဖွယ်အကျင့်ကိုပြုတော်မူပြီ [ ... ] ဖော်ပြခဲ့တဲ့နှင့်မဟုတ်ပါ
အဆိုပါ Romy နှင့် Savannah ကိစ္စယခုတက် hushed?
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ROMY & Savannah ပြဿနာ	by မာတင် Vrijland	ဇွန်လ 23 2017 အပေါ်	•5မှတ်ချက်
ကိစ္စအများစုအကြီးအကျယ်ဝေဖန်ခံနေရသို့မဟုတ်တရားဝင်ပုံပြင်မေးခွန်းထုတ်ကြောင်းနှင့်အတူ, သငျသညျကိုသူတို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအသံတိတ်ဖြစ်ကြောင်းကြည့်ပါ။ ဤနည်းဗျူဟာကြောင့်အာရုံပျက်, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုလားနေသောကြောင့်ငိုကြွေးသောသူသည်မည်သို့မည်ပုံကလေးတစ်ဦးမှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဆင်တူသည်။ သင်ကပေးလျှင်သင် [ ... ] ခံတွင်းထဲမှာ pacifier ထား
ဤ Romy Nieuwburg နှင့် Savannah Dekker ကိစ္စတွင်အတွက်သံသယရှိသူများ၏အမည်များရှိပါသလဲ
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ROMY & Savannah ပြဿနာ	by မာတင် Vrijland	ဇွန်လ 16 2017 အပေါ်	• 68 မှတ်ချက်
[Update ကို: ဒီမှာကနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအတွက်တစ်ခုလုံးကိုဖိုင်ဖတ်ရှုပါ] ဒါဟာ Romy နှင့် Savannah ဒေါသ၏သတ်ဖြတ်မှုအတော်လေးအလုပ်များစောင့်ရှောက်ကြောင်းရှင်းပါတယ်။ အနည်းငယ်ထူးထူးဆန်းဆန်း-ရှာဖွေနေပူးပေါင်းကြံစည်မှု Romy ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေတည်ရှိစဉ်းစားသော်လည်း, ပပြောကျသှားခဲ့သည်, ထို Facebook မှာမှတ်ချက် [ ... ] အထူးသဖြင့်လမ်းကြောင်းမှားနှင့်အထက်လူများ၏သလိုပဲ
ပူးပေါင်းကြံစည်မှု Romy Nieuwburg ကိစ္စ Romy & Savannah အတွက် invalidated: တိုင်များစွာသောမေးခွန်းများကို!
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ROMY & Savannah ပြဿနာ	by မာတင် Vrijland	ဇွန်လ 13 2017 အပေါ်	• 34 မှတ်ချက်
ငါ (ကဒီမှာကြည့်ပါ) ဖြစ်နိုင်သည်မတည်ရှိမယ်လို့ Romy Nieuwburg ထင်နေတဲ့စာဖတ်သူတစ်ဦးပူးပေါင်းကြံစည်မှုစိတ်ကူးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောငါ၏ဆောင်းပါး 11 နင်္ဂနွေနေ့, ဇွန်လဖို့အများကြီးတုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်မကိုလည်းမလေးစားငါတစ်ခုခုထုတ်ဝေရန်နိုင်ကြောင်းတွေ့သောသူစာဖတ်သူများအနေဖြင့်အချို့သောအမျက်ထွက်တုံ့ပြန်မှုတယ်။ ကျွန်မအတော်လေး [ ... ] နားလည်
Romy Nieuwburg သူကားအဘယ်သူနှင့် Romy နှင့် Savannah များ၏လူသတ်မှုအကြားဆက်ဆံရေးကဘာလဲ?
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ROMY & Savannah ပြဿနာ	by မာတင် Vrijland	ဇွန်လ 11 2017 အပေါ်	• 37 မှတ်ချက်
[Update ကို: ပထမဦးဆုံးတစ်ခုလုံးကိုဖိုင်ဖတ်ရန်နှင့်အောက်ပါကြံစည်မှု invalidated ခံခဲ့ရပုံကိုကြည့်ပါ, ဒါပေမယ့်သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံး] အထက်ပါ link ကို click နှိပ်ပြီးလတ်တလောဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှု
ကင်မရာ2op Coronavirus covid-19 en de wetenschap: Hoe komt het je lichaam in en hoe draag je het over?
မာတင် Vrijland op Coronavirus covid-19 en de wetenschap: Hoe komt het je lichaam in en hoe draag je het over?
ဘင် op Coronavirus: ဗိုင်းရပ်စ်တွေကဘယ်ကနေလာတာလဲ၊ သူတို့ဘယ်လိုများများပြားလာပြီးပြောင်းရွှေ့ကြတာလဲ။
Mijnbrein op Coronavirus: ဗိုင်းရပ်စ်တွေကဘယ်ကနေလာတာလဲ၊ သူတို့ဘယ်လိုများများပြားလာပြီးပြောင်းရွှေ့ကြတာလဲ။